Semalt: Small स्थानीय एसईओ रणनीति साना व्यवसायका लागि
यो सानो व्यवसाय मालिकमाथि भर पर्दछ कि Google लाई थाहा दिनुहोस् कि कहाँ व्यवसाय बस्थे, र यसले के प्रस्ताव गर्दछ। यो कम्पनीलाई खोजी ईन्जिन रँकिंग पृष्ठहरूमा देखा पर्न मद्दतको साथ साथ त्यस क्षेत्रमा सम्बन्धित दर्शकहरूको लागि दृश्यता वृद्धि गर्न मद्दतको साथ छ। यो स्थानीय एसईओ अप्टिमाइजेसन को रूप मा परिचित छ, र यो एकदम भ्रामक विषय हुनसक्दछ विशेष गरी Google द्वारा पिजन एल्गोरिथ्मको साथ। यसले रैंकिंग कारकहरू बुझ्न सजिलो बनाउँदछ जुन स्थानीय एसईओ सेवाहरूलाई मद्दत गर्दछ ।
सेभल्टका विशेषज्ञ इभान कोनोवालोभले उनीहरूको एसईओ उद्देश्यमा के समावेश गर्नुपर्छ भनेर तोक्छ ।
१. स्थानीय स्थान पृष्ठहरू सिर्जना गर्नुहोस्
यो सुनिश्चित गर्दछ कि मालिकसँग तीन शीर्ष खोज इञ्जिनहरूको लागि एक स्थानीय व्यापार पृष्ठ छ। कुलमा, त्यहाँ प्रबन्ध गर्न कुल तीन सूची र ड्यासबोर्डहरू छन्। सबैलाई गर्नु पर्ने भनेको व्यवसाय सम्बन्धी सबै जानकारीहरू भर्नु हो, र त्यो सबै खाताको लागि हुनेछ।
२. पृष्ठलाई सहि अप्टिमाइज र वर्गीकृत गर्नुहोस्
अप्टिमाइजेसनले उच्च-गुणको फोटोहरू अपलोड गर्ने, काम गर्ने घण्टाको विवरण, र सबै उपलब्ध सेवाहरूको सूची समावेश गर्दछ। वर्गीकरण, अर्कोतर्फ, खोज ईन्जिनलाई व्यापारले के गर्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्नु हो। तिनीहरूले २-categories कोटिहरू प्रस्ताव गर्नुपर्दछ तपाईंलाई तिनीहरू मध्ये कुनै एकमा तपाईंको व्यवसाय राख्ने क्षमता दिन। खोज ईन्जिनहरूले बिना कुनै वर्गीकरण वा गलत वर्गीकरणको साथ व्यवसाय प्रदर्शित गर्दैन।
Urate. सटीक ब्यापार उद्धरण
सँधै यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कम्पनीको NAP (नाम, ठेगाना, फोन) विवरण खोज ईन्जिनमा सबै सूचीबद्धमा एकरूप छन्। त्यहाँ उच्च संभावना छ कि ब्यापार पहिले नै कसै कसैद्वारा सूचीबद्ध गरिएको थियो। सबै एक गर्न आवश्यक छ कि दावी गर्न को लागी द्वन्द्वहरु बाट जोगिन। उद्धरण दावी गर्न मालिकलाई केहि नाम र स्थानको साथ अर्को व्यवसाय छ कि छैन भनेर केही अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि सम्भावित माध्यमहरू मार्फत स्वामित्व प्रमाणित गर्न जारी राख्नुहोस्। संसाधनहरू प्रयोग गर्नुहोस् जस्तै Yext वा स्थानीयकरण, वा गुगल नक्सामेकर प्रक्रियाको गति बढाउनको लागि।
Online. अनलाइन समीक्षा
गुगलले अनलाइन समिक्षा पनि देख्दछ जुन कुनै वेबसाइटलाई दर्जा दिन। यद्यपि यो केवल ग्राहकहरु हुन् जुन साइटलाई खोज परिणाम पृष्ठमा पूनरावलोकन गर्छन। समीक्षाले निर्धारण गर्दछ कि यदि पर्यटकहरू लिंकमा क्लिक गर्न चाहन्छन् वा छैनन्। एक सजिलै वेबसाईटमा "पोष्ट समीक्षा" बटन थप्न सक्नुहुन्छ आगन्तुकहरूको लागि सजिलो बनाउनको लागि, उनीहरूलाई खरीदको पछि समीक्षा छोड्ने प्रोम्प्ट गर्दै।
Quality. गुणस्तर फोटोहरू
जब व्यक्तिले केहि खोज्छन्, उनीहरू यसको चित्रहरू हेर्न मन पराउँछन्। गुगल + स्थानीयले प्रयोगकर्तालाई दशवटा चित्रहरू अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ। खातामा धेरै चित्रहरू अपलोड गर्नु धेरै ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने कुञ्जी हो। निश्चित गर्नुहोस् भवनको वास्तविक फोटो लिनुहोस्, दुबै भित्र र बाहिर। फोटो थप्न, सिर्जना गरिएको स्थानीय लिस्टि visit हेर्नुहोस्, र लि the्क फेला पार्नुहोस् जुन "फोटोहरू थप्नुहोस्" पढिएको थियो।
Op. वेबसाईट अप्टिमाइज गर्नुहोस्
स्थानीय खोजीको अंश वेबसाइट हो र यसका बारे व्यक्तिहरू के भन्छन्। वेबसाइटसँग केहि सम्पर्क जानकारी हुनुपर्दछ, प्राथमिकता फोन नम्बर। एक थप फाइदा भनेको जहाँ सम्भव भएमा स्थानीय कुञ्जी शव्दहरू समावेश गर्नु र लक्षित श्रोताको लागि सान्दर्भिक सामग्री सिर्जना गरेर उनीहरूमा निर्माण गर्नु। स्थानीय दर्शकहरु संग एक बनाउने कनेक्शन निर्धारण गर्दछ यदि उनीहरु पुनःभेट गर्ने छन्।